ဟင်္သာစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းလျှောက်လွှာအကြောင်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ပညာရေးဘွဲ့ စာပေးစာယူ (၂)နှစ် သင်တန်း (ပထမ)နှစ်အတွက် လျှောက်လွှာကို ဒီဇင်ဘာ (၁ဝ) ရက်မှ စတင်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လျှောက်လွှာတင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံပညာဦးစီးဌာနများနှင့်ပညာရေးသုတေသန စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ အထက်တန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြ၊ မူလတန်းကျောင်းအုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသူတွေ၊ အထက်တန်းပြ( သို့မဟုတ်) အလယ်တန်းပြ လစာနှုန်းထားတူညီတဲ့ သင်ကြားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်သူူတွေ၊ ပညာရေးကောလိပ်များတွင် နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။
ပညာရေးကောလိပ်နည်းပြ အထက်တန်းပြနှင့် လစာနှုန်းထားတူညီသည့် သင်ကြားရေးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ဒု-ဦးစီးဌာနမှူးတွေ၊ ဒု- ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် PGDMAဘွဲ့ရ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးတွေကတော့ လက်ရှိရာထူးမှာ ၃၁ . ၁၂. ၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ သင်ကြားရေးလုပ်သက် အနည်းဆုံး ၅နှစ်ပြည့်ပြီးသူူတွေလည်း လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။
အလယ်တန်းပြ(သို့မဟုတ်)မူလတန်းကျောင်းအုပ်တွေနဲ့ လစာနှုန်းထားတူညီတဲ့ သင်ကြားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မူလ/ဒု ဒု- ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ၊ PGDMAဘွဲ့ရ လ/ထ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးတွေလည်း လက်ရှိရာထူးမှာ ၃၁ .၁၂. ၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက် အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
အထက်မှာ ပြောထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသူတွေကတော့ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲလျှောက်လွှာပုံစံများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာ ရယူနိုင်ပါပြီ။ နောက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေဆီကနေ ထောက်ခံချက်နဲ့အတူ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမှာပါ။
ပညာရေးကောလိပ်များမှ လျှောက်ထားချင်သူတွေအတွက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာပညာရေးကောလိပ်ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး ထောက်ခံချက်နဲ့အတူ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမှာပါ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ရက် နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲလျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဘွဲ့(B.Ed)စာပေးစာယူသင်တန်းဟာ ၂ နှစ် သင်တန်းဖြစ်သဖြင့် ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူ၊ သင်ပြနည်းကျွမ်းကျင်မှုတို့အတွက် အထူးပြုဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ရေးချယ်ဖြေဆိုသင်ယူခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားသူရဲ့ မူလဘွဲ့ရဘာသာရပ်ကို သင်ယူလိုတဲ့ အထူူးပြုဘာသာရပ်အဖြစ် လျှောက်ထားရမျာဖြစ်ပါတယ်။ မူလဘွဲ့ရ ဘာသာရပ်နဲံ သင်ယူလိုတဲ့ အထူးပြုဘာသာရပ် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက လျှောက်လွှာအား လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ၂ဝ၁၈၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၈ရက်၊ နံနက် (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီအထိ သက်ဆိုင်ရာမြို့တွေမှာ စစ်ဆေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉- ၇၉၅၄ဝဝဝ၂၂ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားသူများကို တိုင်းဒေသကြီးန့ဲ ပြည်နယ်အလိုက် လိုအပ်တဲ့ဆရာအရေအတွက်နဲ့ ဘာသာရပ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စာမေးပွဲရမှတ်အလိုက် စိစစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး လုပ်သက်ကြီးစဉ်အုပ်စုမှ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ဆရာအရေအတွက်နဲ့ ဘာသာရပ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ စာမေးပွဲရမှတ်အလိုက် ဆရာ၊ ဆရာမဦးရေ အချိုးအတိုင်း စိစစ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါး“ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ သွားဆေးခန်းသွားဖို့ မကြောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ “